Mateo 15 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Mateo Asɛmpa No 15:1-39
Ɔkasa tiaa nnipa amammerɛ (1-9)
Nea efi komam ba na egu onipa ho fĩ (10-20)
Foinikeni bea bi gyidi kɛse (21-28)
Yesu saa yare pii (29-31)
Yesu maa nnipa 4,000 aduan (32-39)
15 Ɛnna Farisifo ne akyerɛwfo fii Yerusalem baa Yesu nkyɛn+ bɛkae sɛ: 2 “Adɛn nti na w’asuafo no bu nananom amammerɛ* so? Sɛ wɔrebedidi sɛɛ a, wɔnhohoro wɔn nsa.”*+ 3 Obuaa wɔn sɛ: “Mo nso, adɛn nti na mo amammerɛ nti mubu Onyankopɔn ahyɛde so?+ 4 Ebi ne sɛ, Onyankopɔn kae sɛ, ‘Di wo papa ne wo maame ni’;+ afei nso, ‘Nea ɔkasa tia* ne papa anaa ne maame no, ma wonkum no.’+ 5 Nanso mo de moka sɛ, ‘Obiara a ɔbɛka akyerɛ ne papa anaa ne maame sɛ: “Biribiara a mewɔ a metumi de aboa wo no, ɛyɛ akyɛde a mahyira so ama Onyankopɔn” no,+ 6 enhia sɛ odi ne papa ni koraa.’ Ɛno nti, mode mo amammerɛ asɛe Onyankopɔn asɛm.+ 7 Nyaatwomfo, ɛfata sɛ Yesaia hyɛɛ mo ho nkɔm sɛ:+ 8 ‘Ɔman yi de wɔn ano na edi me ni, na wɔn koma de, atwe afi me ho kɔ akyirikyiri. 9 Wɔsom me kwa, efisɛ wɔkyerɛkyerɛ nnipa ahyɛde.’”+ 10 Ɛnna ɔfrɛɛ nnipadɔm no baa ne nkyɛn, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Muntie na monte ase:+ 11 Ɛnyɛ nea ɛkɔ onipa anom na egu ne ho fĩ, na mmom nea efi onipa anom ba na egu ne ho fĩ.”+ 12 Afei asuafo no bebisaa no sɛ: “Bere a Farisifo no tee nea wokae no, wunim sɛ ɛtoo wɔn hintidua?”+ 13 Obuae sɛ: “Dua biara a ɛnyɛ me soro Agya na oduae no, wobetu. 14 Munnyaa wɔn. Wɔyɛ akwankyerɛfo anifuraefo. Na sɛ onifuraefo kyerɛ onifuraefo kwan a, wɔn baanu nyinaa bɛhwe amoa mu.”+ 15 Ɛnna Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Kyerɛkyerɛ mfatoho no mu kyerɛ yɛn.” 16 Ɛnna ɔkae sɛ: “Enti mo nso, munnya ntee ase?+ 17 Munnim sɛ biribiara a ɛkɔ onipa anom no, ɛkɔ ne yam, na efi ne nipadua mu kogu tiafi mu anaa? 18 Nanso nea efi onipa anom ba no fi koma no mu, na saa nneɛma no na egu onipa ho fĩ.+ 19 Ɛho nhwɛso ne sɛ, koma no mu na adwemmɔne fi ba:+ awudi, awaresɛe, aguamammɔ,* korɔnbɔ, adanse a ɛnyɛ nokware,* ne abususɛm. 20 Eyinom ne nneɛma a egu onipa ho fĩ, na sɛ obi anhohoro ne nsa* na odidi a, engu ne ho fĩ.” 21 Afei Yesu fii hɔ, na ɔkɔɔ Tiro ne Sidon mpɔtam.+ 22 Na hwɛ! Foinikeni bea bi a ofi mpɔtam hɔ bae bɛteɛɛm sɛ: “Awurade, Dawid Ba, hu me mmɔbɔ. Ahonhommɔne reteetee me babea dodo.”+ 23 Nanso wanka hwee ankyerɛ no. Enti n’asuafo no bɛsrɛɛ no sɛ: “Ma ɔnkɔ, na teɛ ara na ɔreteɛteɛm di yɛn akyi.” 24 Obuae sɛ: “Wɔansoma me nnipa biara nkyɛn, gye Israel fi nguan a wɔayera no.”+ 25 Na ɔbea no bae bɛkotow no kae sɛ: “Awurade, boa me!” 26 Obuae sɛ: “Ɛnyɛ papa sɛ wɔbɛfa mmofra paanoo atow ama nkraman mma.” 27 Ɛnna ɔbea no kae sɛ: “Ɛyɛ ampa, Awurade, nanso nea ɛwom ne sɛ, nkraman mma no di paanoo a aporoporow afi wɔn wuranom pon so agu fam no bi.”+ 28 Afei Yesu buaa no sɛ: “O ɔbea, wo gyidi so; ɛnyɛ hɔ mma wo sɛnea wopɛ.” Na efi saa bere no ara, ne babea no ho tɔɔ no. 29 Bere a Yesu fii hɔ no, ɔbaa Galilea Po ho,+ na bere a ɔforoo bepɔw no, ɔtenaa ase. 30 Ɛnna nnipadɔm pii bɛn no, na wɔde mpakye, wɔn a wɔadi dɛm, anifuraefo, mum, ne afoforo pii kaa wɔn ho, na wɔde wɔn beguu ne nan ase, na ɔsaa wɔn yare.+ 31 Bere a nnipa no hui sɛ mum rekasa na mpakye renantew na anifuraefo hu ade no, wɔn ho dwiriw wɔn, na wɔhyɛɛ Israel Nyankopɔn anuonyam.+ 32 Na Yesu frɛɛ n’asuafo no baa ne nkyɛn, na ɔkae sɛ: “Nnipadɔm yi yɛ me mmɔbɔ,+ efisɛ wɔatena me nkyɛn nnansa ni, na wonni hwee a wobedi. Mempɛ sɛ mɛma wɔde kɔm akɔ. Anhwɛ a na wɔakotwitwa ahwe wɔ kwan so.”+ 33 Nanso asuafo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Baabi a atew ne ho sɛɛ de, ɛhe na yebenya paanoo a ɛbɛso nnipadɔm bebrebe yi?”+ 34 Ɛnna Yesu bisaa wɔn sɛ: “Paanoo ahe na mowɔ?” Wɔkae sɛ: “Ason, ne mpataa kakraa bi.” 35 Enti, ɔmaa nnipadɔm no tenatenaa fam. 36 Afei ɔfaa paanoo ason no ne mpataa no, na bere a ɔdaa Onyankopɔn ase wiei no, obubuu mu, na ofii ase kyekyɛ maa asuafo no, na asuafo no nso kyekyɛ maa nnipadɔm no.+ 37 Na wɔn nyinaa di mee. Na bere a wɔsesaw ase mporoporowa no, ɛyɛɛ nkɛntɛn akɛse ason mama.+ 38 Wɔn a wodii bi no yɛ mmarima 4,000; wɔankan mmea ne mmofra nkumaa no anka ho. 39 Ɛnna ɔmaa nnipadɔm no kɔe, na ɔtenaa ɔkorow no mu baa Magadan mpɔtam.+